Yakawanda Yakawanda Yechirongwa Chekugadzira Web Yakataurwa naSemalt
Pari zvino, kurasa web kwave chinhu chinokosha bhizinesi rebhizimisi pamwe nemasangano ose achiitora. Zvinosuruvarisa, nzira iyi haisati yashandiswa zvizere nekuda kwemamwe matambudziko. Zvechokwadi, unogona kuita zvekutsvaga pakutsvaga kuti uwane zvatinoda, uye iwe unogona kuzvikopa. Zvisinei, izvi zvinongogoneka nekawandu hwemashoko. Iwe zvechokwadi unoda webhuti yekutsvaga zvigadzirwa kuti uwane yakawanda yematare - putzinstitut zuerich preise. Dambudziko guru iri pano nderokudiwa kweprogram yekuziva.
Unofanirwa kuva nechimwe chikwata chekugadzirisa ruzivo uye ruzivo kukwanisa kugadzirisa zvishandiso zvekutsvaga webhu zvakanaka. Asi vanhu vashomanana chete vane chirongwa chekudzidza. Kunze kweizvozvo, kunyora web web scraping tool inotyisa uye inopedza nguva kune vanyori vane ruzivo rwakakura. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, iwe unogona kuchinja purogiramu yepurogiramu yako yega yega inotarirwa webhusaiti nekuti yese webhusaiti yakasiyana. Ichi ndicho chikonzero ichi chitsva chekutsvaga webhutori chakatora nyika kuburikidza nedutu. Icho hachisi chirongwa chekudzidzisa, uye inoshanda. Zita rekushandisa iri OutWit Hub
OutWit Hub inonyanya kuwedzera Firefox iyo inogona kubudiswa uye kuiswa pa browser yako. Newe software, iwe uchachera mawebhusayithi akasiyana nekamwe chete kuchitsva kwe mouse yako. Kunyange zvazvo purogiramu ine simba rekutsvaga mhando dzakasiyana dzewebsite nekunyoreswa kwekugadzirisa, iwe unogonawo kuigadzira kuti iite maererano nezvido zvako.
Pano Ndiyo Mashandisiro Aungaita Shanduro
Unofanira kuikanda kubva kuMozilla kuwedzera-muchitoro uye kuisa mu browser yako yeFirefox. Mushure mekugadzirwa, add-on haisi kuzoshanda kusvikira iwe uchitangazve browser yako. Iwe uchawana zvimwe zvisiri nyore zvinyorwa zvekutsvaga pane kuruboshwe pane zvekushandisa. Kunyangwe izvi zvingasarudzwa zviripo, zvakakwana kuti iwe ubvise zvidhori zvinodiwa uye zvinyorwa kubva pawebhu peji kana zvimwe zvekubatanidzwa pane peji.
Zvisinei, izvo zvingasarudzwa hazvigoni kuita zvakakosha web scraping mabasa. Kana uchida zvakasarudzwa, unofanirwa kuenda kuAva Automator, uye enda kune Scrapers chikamu. Nhamba yekodha yeakananga iwe web page icharatidzwa apa. Nhanho inotevera ndeyokutsvaga maratidziro akaiswa mumutsetse. Zvinogona kushandiswa sechiratidzo chezvinhu zvaunoda deta musati waiswa.
Iye zvino, unofanira kuzadza "Marker pamberi" uye "Marker pashure" masimi, uye chengeta bhatani rekuita. Mushure mezvo, iwe unongoda kugara pasi uone kuti OutWit Hub inoshanda sei. Iyi purogiramu inokupa rusununguko rwekushandisa multiple scrapers panguva imwe chete, nokudaro nekuvandudza nguva yekudzoka.
Iyi inongova nzira inowanzoitwa yekubudisa deta. Zvinyorwa zvikamu zve add-on zvinouya nezvidzidzo zvakasiyana siyana zvekutsvaga zvido zvekutsvaga zvido / zvido. Iwe uchawana hurongwa huchikurumidza uye huri nyore kana ukaziva. Saka, zvinokurudzirwa kudzidza zvidzidzo zvechitendero.
OutWit Hub ine unyanzvi hwekubata zvinyorwa zvakaoma zvinyorwa nemabasa ake akawanda akaoma. Saka, iwe ungada kunzwisisa kushandiswa kwemabasa ose. Semuenzaniso, kubvisa tsvaga kubva kune dzinoverengeka zvinowanikwa panzvimbo dzine maitiro akafanana, unoda basa rinonzi "Format Column".
Mukugumisa, OutWit Hub inofanirwa kudhinda data kuwedzera kune vose vadzidzisi uye vasiri mapurogiramu. Iyo inewo mabasa akawanda aunofanira kudzidza. Basa rakaoma zvikuru raunoshandisa, rinokurumidza uye rakanaka, mhinduro dzako dzekutsvaga yewebhu dzichave.